သင်၏မျက်နှာကိုမီးမောင်းထိုးပြ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 13, 2012 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 13, 2012 Douglas Karr
ရှေးရှေးများသည်ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမည်များနှင့် URLs များကိုမေ့တတ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မျက်နှာများကိုမေ့တတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအားလုံးကိုသူတို့မျက်နှာကိုထုတ်ဖို့အကြံပေးတာဒါကြောင့်ပဲ! ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးတည်ရှိမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်မျက်နှာများကိုစတင်ပြသနေပြီဖြစ်သည်။ ဖော်ရွေသောမျက်နှာသည်သင့်ရှေ့မှောက်၌အလားအလာကောင်းများရရှိရန်သက်တောင့်သက်သာရှိသောတံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုလျှော့မတွက်သင့်ပါ။
ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသော ol mug ကိုနေရာတိုင်းမထားပါ။ ရှေးရှေးငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဆက်လက်ဒါကြောင့်ငါကလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်…အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှား။ အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံဆရာကောင်းတစ် ဦး ကိုရှာပါ - သင်၏ဓာတ်ပုံကို iPhone ကင်မရာနှင့်လက်ပ်တော့ပ်သို့မထားခဲ့ပါနှင့်။ ကြီးမားသောဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး သည်အလင်းကိုသတ်မှတ်ပြီးသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုက်ညီမည့်အတိမ်အနက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ငါတို့ချစ်တယ် ရှင်ပေါလု D'Andrea ရဲ့ အလုပ်လုပ်! အခြေအနေနှင့်ရှုခင်းအပေါ်သူတို့၏တရားစီရင်ခြင်းကိုယုံကြည်ပါ။
တစ်ဦး sign up ပြုလုပ်ပါ Gravatar အကောင့် - သင်၏ပုံကိုတင်ပါ၊ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာအားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးအတည်ပြုပါ။ Gravatar ကိုမှတ်ချက်ပေးသည့်စနစ်အများစုသည် (စင်မြင့်ကိုပိုင်ဆိုင်သော) WordPress အပြင် အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လေးစားသည်။ ယခုသင်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်တွင်ဖြစ်စေ၊ WordPress ပရိုဖိုင်းတွင်ဖြစ်စေသင့်မျက်နှာသည်တသမတ်တည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
sign up ပြုလုပ်ပါ Google+ မှာ - သင်၏ဂူဂယ်လ် + ပရိုဖိုင်းအတွက်သင်ထည့်သွင်းထားသောဆိုဒ်များကိုသင်ထည့်သွင်းပါကရေးသားသူ mark-up သည်ဆိုက်အတွင်း၌ရှိလျှင်သင်၏ပုံသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပင်ဖော်ပြလိမ့်မည် (ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအများစုကဤအရာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်) ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် Google+ သည်သင်၏ပုံကို markup မပါဘဲဖော်ပြသည်။
သင်၏ WordPress ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်ပါ - ကြီးသော plugins များကြိုက်တယ် Yoast ၏ WordPress SEO plugin သင်၏ဂူဂယ်လ် + ပရိုဖိုင်းကိုနေရာချရန်လယ်ကွင်းများကိုပေါင်းထည့်ပါ၊ ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်သင်၏ပုံကိုပြသရန်လိုအပ်သောအမှတ်အသားကိုပေးသည်။
သင့်ပုံများကိုသိမ်းထားရန်ကြိုးစားပါ သင်၏လူမှုကွန်ယက်ပရိုဖိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဘလော့ဂ်မှတ်ချက်၊ Facebook နှင့် Twitter တို့တွင်စတင်မြင်သောအခါသူတို့သည်ပရိသတ်၊ နောက်လိုက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ပိုများသည်။ စာသားအတိုင်းငါဟာပဲရစ်ကနေဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုလူတွေဆီလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံနဲ့ငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။
အာကာသထဲမှာပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကာတွန်းတွေ (ခင်ဗျားကကာတွန်းဆရာမဟုတ်ရင်) (သို့) အခြားရုပ်ပုံများကိုဆန့်ကျင်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ သူတို့အဖြစ်လူသိများရှားပါးရောဂါရှိသည်မဟုတ်လျှင် prosopagnosiaလူသားများသည်သင်၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်မိခြင်းထက်မျက်နှာများကို ပို၍ သိသည်။
PS ။ Jenn Lisakအလားတူရှင်းပြတဲ့ client ကိုမှကြီးစွာသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့!
SERPs သည် Search Engine Volatility Index ကိုစတင်ခဲ့သည်
မေလ 13, 2016 မှာ 1: 18 pm တွင်
Great post ။ လူတိုင်းသိသည်နှင့်အမျှလူတိုင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသွင်အပြင်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။